Maxay yoga ugu fiicantahay dhalmadaada | Bezzia
Maxay yoga ugu fiicantahay dhalmadaada kadib
Maria Jose Roldan | | Talada hooyooyinka, Hooyooyinka
Umusha kadib waxay noqon kartaa waqti ay dumarku si gaar ah u dareemaan nugul jir ahaan iyo maskax ahaanba. Soo-kabashada ayaa gaabis ah in kastoo ay kaa dhigayaan inaad aamminsan tahay in 16 toddobaad gudahood lagaa soo kaban doono, xaqiiqadu waxay tahay in haweeneydu u baahan tahay ugu yaraan hal sano si ay u bilawdo inay umuliso tan ka wanaagsan. Jidhku wuxuu marayaa isbedello badan wuxuuna u soo maray xanuun iyo culeys fara badan, waana in lagu xisaabtamo. Yoga ayaa kaa caawin kara inaad dhaqso u dareento.
Halkaan waxaan kuugu sheegeynaa sababaha qaarkood in sameynta yoga dhalmada kadib ay go'aan fiican kuu noqon karto. Wali ma ogi sababta? Sii wad akhriska.
1 Xooji jirkaaga
2 Miisaan lumis
3 Adigu waxaad iska horeysiisaa liiskaaga mudnaanta
4 Waxaad la kulantaa hooyooyinka kale ee cusub
Dhalashada kadib, waxaad u ogolaatay waqti jirkaagu ku nasto; hadda waa waqtigii dib loogu dhisi lahaa xooggaaga iyo murqahaaga. Bogsiinta muruqyada asaasiga ah, dhisida awooda guud waxay kaa caawin kartaa inaad ku dhameystirto howlahaaga maalin kasta daal yar. waxayna kahortagi kartaa xanuun muruqyada ah oo aad la kulmi karto markaad soo qaadanaysid oo aad haynaysid ilmahaaga sida xawliga ah u koraya.
Murqaha oo la dhiso ayaa waliba kaa caawin kara inaad miisaankaaga dhinto. Markaad leedahay murqo badan oo caato ah, waxaad kordhineysaa dheef-shiid kiimikaad nasasho leh. Dhab ahaan, muruqu wuxuu ku deeqayaa 20% wadarta kharashka tamarta maalinlaha ah, marka la barbardhigo baruurta, taas oo kaliya kudareysa 5%.
Laakiin maadaama aad u badan tahay inaadan diyaar u ahayn inaad miisaanka garaacdo weli, yoga dhalmada ka dib waa hab jilicsan, saameyn hooseeya oo lagu bilaabayo. Mawduucyo sida eey hoos u jeeda, kursi, iyo dagaalyahan ayaa bilaabi kara inay aasaas aas aas u noqdaan. Markaad bilowdo inaad dareento xoog waxaad ku dari kartaa xoogaa caqabado badan ah, tababaro muddo dheer ah, iyo xawaareynta xawaaraha waxqabadkaaga.
Adigu waxaad iska horeysiisaa liiskaaga mudnaanta
Markaad ilmo dhasho, waxaad waqtigaaga intiisa badan ku bixisaa daryeelka kan yar. Iyada oo intaas oo quudin, nadiifin iyo daryeelba leh, waxaa haray waqti yar oo loogu talagalay daryeelka shakhsi ahaaneed. Way fududaan kartaa inaad iska ilowdo naftaada oo aad dadka kale wax walba ka hor mariso marwalba ... in tani aakhirka ay kugu yeelan karto dhibkeeda oo aad ku xanuunsato Maxaa intaa ka badan, dadka kale si sax ah uma quudin kartid haddii aadan si fiican naftaada u quudin.
Dhaqdhaqaaqa yoga ee umusha maalin kasta, xitaa haddii ay tahay shan daqiiqo oo keliya si loo buuxiyo ama loo nasto, waa fursaddaada inaad quudiso maskaxdaada oo aad ku tababarto is-oggolaansho iyo naxariis. In kasta oo hooyooyinka badani dareemaan dambi ah inaysan waqtigooda oo dhan la qaadan carruurta dhasha, Waxa aysan garaneynin waa in inta badan ay is daryeelaan naftooda, ay awood badan u yeelan doonaan inay daryeelaan dadka kale.
Waxaad la kulantaa hooyooyinka kale ee cusub
Kaqeybgalka fasalka yoga kadib ee caadiga ah dhalmada kadib waxay leedahay faa iido dheeri ah: waxaad sameysankartaa saaxiibo hooyo cusub! Joogitaanka guriga maalintii oo dhan ilmaha dhasha ah waxay kaa tagi kartaa inaad dareentid go'doon, taas oo kordhin karta fursadahaaga niyadjabka iyo walwalka. Waxa kale oo laga yaabaa inaad su'aalo qabtid ama aad la yaabtid sida hooyooyinka kale ula macaamilaan welwelka guud ee hooyada cusub.
Fasal yoga dhalmada ka dib waa qol ay ka buuxaan dumar sidaada oo kale ah, oo aad la kulanto isla farxad iyo walwal. Markaad tagto dhowr cashar kadib, waxaad u badan tahay inaad heshid hooyo ama koox hooyooyin ah oo aad jeceshahay inaad la hadasho. Wadahadalladani waxay horseed u yihiin xikmadda iyo wehelka wadaagga ah ee ku siin kara taageerada aad u baahan tahay si aad uga gudubto waqtigan xiisaha leh. laakiin aad u walaac badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Maxay yoga ugu fiicantahay dhalmadaada kadib
Miisaan ku dhimo baaskiilka jimicsiga
Codad diiran oo lagu qurxiyo guriga